Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Daniele De Rossi nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Capitan Futuro".
Anyị Daniele De Rossi Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Akụkọ Ochie nke Rome gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere Onye ndu ya na Rome ogologo ndụ ma ole na ole tụlere akụkọ ndụ Daniele De Rossi nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Daniele De Rossi Akụkọ nwata - Ndụ mbido:
Daniele De Rossi, Ufficiale OMRI mụrụ na 24th ụbọchị nke July 1983 na Rome, Italy. Ọ bụ ebe obibi-bekee ma bụrụ onye amụrụ dịka naanị nwa nne na nna ya;
Ezigbo nne na nna amaghi, Alberto De Rossi (amuru 9 Septemba 1957), onye bụbu onye Rome na onye nkuzi Rome's Primavera.
A mụrụ Daniele De Rossi na ịgba bọl. Nna ya bụ Albert bụ onye ọkpụkpọ ọkachamara nke mbụ yana onye nchịkwa ugbu a nke ndị otu AS Roma Primavera.
Mgbe ọ hụrụ nna ya ka ọ merie asọmpi nke ndị ntorobịa Italia, Coppa Italia Primavera na Italian Supercoppa nyere ya nnukwu mmasị maka egwuregwu ahụ.
Mgbe Daniele soro nzọụkwụ ya na football ya na ndị otu ya, ọ banyere na ndị ntorobịa Rome.
De Rossi malitere dị ka onye na-agbachitere ma ọ bụ dị ka onye na-ekpochapụ ihe, wee bụrụ onye na-egwu egwu na-agha ụgha ma guzosie ike dị ka onye na-adịgide adịgide n'ahịrị mmalite.
Mgbe ọ masịrị ndị ntorobịa, ndị otu egwuregwu izizi ya bịara na 2001, mgbe ọ bụ naanị 18 afọ.
Kemgbe ahụ, ọ nọrọ n'akụkụ n'akụkụ kemgbe ọ ghọrọ nwoke na-eme egwuregwu. Roma nke Italy nke Serie A na obodo ya ma ọ bụ ezigbo nwa Rome.
N'ihi nduzi ya na nraranye ya na ọkwa, e nyewo ya aha ahụ Capitan Futuro ("onye isi n'ọdịnihu") site n'aka ndị Fans na ndị mgbasa ozi, ebe ọ bụ na achọrọ ya ịga nke ọma Totti dị ka onye isi ndị Rom. Ọnọdụ mmetụta uche a bịara ụbọchị Totti kwụbara akpụkpọ ụkwụ ya.
Nke a mesịrị mechaa. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Tamara Pisnoli? Nwunye Daniele De Rossi:
N'agbanyeghị na ọ bụ onye Italiantali, De Rossi nwere anya maka ụmụ nwanyị Bekee. Ọ malitere ịlụ onye a ma ama bụ Italo-British omee, Tamara Pisnoli.
Nna ya bụ onye America na nne ya bụ onye bekee. De Rossi lụrụ Tamara Pisnoli na 18 May 2006.
Tupu alụmdi na nwunye ha, Tamara ghọrọ nne nwa ya nwanyị Gaia, onye bụbu onye agba egwu nke Mediaset, Sarabanda.
Site na ọmụmụ nwa ya nwanyị mara mma na 16 June 2005, De Rossi gbanwere nọmba 16 n'oge oge 2005-06, nke otu n'ime arụsị ya, Roy Keane, yikwasịkwara.
O di nwute, Daniele De Rossi na Tamara kewara na mmalite nke 2009. Afọ ole na ole mgbe ọ gbachara alụkwaghịm, a nwụchiri Tamara maka imekorita na Mafias ịtọrọ onye ọchụnta ego nọ n'ụlọ mmanya ma kpọga ya n'ụlọ nchekwa ebe a na-ekwu na a tara ya ahụhụ.
E mere mpụ ahụ akụkọ mba na Itali. A maara Tamara na ọ bụ onye nna ya bụ onye a na-akpọ Italian Mafia tupu ọ nwụọ. A kọwara ọnwụ ike ya n’isiokwu dị n’okpuru.
Daniele De Rossi na Sarah Felberbaum:
De Rossi mgbe ịgba alụkwaghịm gbara afọ 2 n'enweghị mmekọrịta ọ bụla. Na 2011, ọ zutere ma hụ Sera Felberbaum n'anya, onye omenala Ịtali na onye England.
Amụrụ na London na nne Bekee na nna Juu-America nke nna German, Felberbaum kwagara Italy na ezinụlọ ya mgbe ọ dị afọ 1. Na 15 afọ ọ malitere ịrụ ọrụ dịka ihe nlereanya ma na-apụta na azụmahịa na vidiyo vidiyo.
Na 26 Disemba 2015, De Rossi lụrụ onye ya na ya na-alụ, Sarah Felberbaum na emume nzuzo na Maldives. Ha nwere nwa nwanyị, Olivia Rose, nke a mụrụ na 14 February 2014.
Di na nwunye a mụrụ nwa nwoke n'oge na-adịbeghị anya, Noah De Rossi a mụrụ na 3rd nke September 2016.
Daniele De Rossi Biography - Ọnwụ nke Nna Ya Inlaw:
Nna nna Tamara nke Italian Winner Daniele De Rossi ama akpa mgbe ọ nwụrụ na a na-enyo enyo na egbu egbu Mafia.
Massimo Pisnoli, bụ onye 48 afọ, hụrụ ụfụ ụfụ na ihu ya na azụ na-eme ka ozu ya bụrụ ihe a na-amaghị na ihe ndị nnyocha ahụ kwuru bụ igbu ọchụ mafia nke Mafia.
Ndị nyocha si ngalaba mgbochi Mafia nke Rome na-enyocha ntọala Pisnoli ma kpughee na ya nwere nkwenye mbụ maka izu ohi na izu ohi ma sị na ya nwere njikọ "Mpụ underworld okirikiri."
Pisnoli na-efu efu ụbọchị iri na Tamara nwa ya nwanyị gwara ndị isi mgbe ha mechara kpọtụrụ ya n'ụlọ ya, Trullo na mpụga Rome.
A hụrụ ozu ya na-emebi emebi na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Campoleone, 35 kilomita n'ebe ndịda Rome nso Latina, mpaghara chere na ọ ga-abụ ebe ọ dịkarịa ala ezinụlọ asatọ nke ndị Mafia.
Otu onye uwe ojii kwuru, sị: Ọ bụ ogbugbu egbu egbu bụ mgbọ dị n'azụ yana otu ọnụ - ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye a na-amatabeghị na ahụrụ ozu ya na ikuku. "
Mgbe nchọpụta ahụ gasịrị, De Rossi bụ onye 25 na-ahapụ ọzụzụ na n'ụlọ ya na nwunye ya na nwa ya nwanyị.
Daniele De Rossi Biography - N'ime Uche Ya:
N'agbanyeghị na football gbara ya gburugburu, Daniele De Rossi abụghị ndị na-ahụkarị gị.
Mgbe ọ bụla ị na-agụ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ na-ege egwu, egwu anaghị atụ egwu onye egwu ahụ ịpụ n'okporo ụzọ a kụrụ ya mgbe ọ na-eme njem, ọ dịkwa mma ka ọ na-ekwu okwu banyere ihe nkiri eserese ka ya na ndị otu na ndị enyi ya na-akparịta ụka.
Na-eme njem n'ime isi Daniele De Rossi, ị ga-ahụ ihe ndị a;
Ugwu ya atọ kacha amasị: is ['Babel' site n'aka Mumford na Ụmụ]
Ndị dike atọ na-abụghị ndị football: bụ - Alex Zanardi na Gianmarco Pozzecco.
Akwụkwọ kacha amasị ya: Shantaram 'nke Gregory David Roberts na 'Mepee' by Andre Agassi, Ike nke Nkịta site n'aka Don Winslow.
Obodo ndị a kacha hụ n'anya hụrụ: Newyork, Glasgow na Istanbul.
Ya atọ kacha mma ika: Oasis, Rolling Stones na Coldplay.
Atọ atọ na-atọ ụtọ na-abụghị ndị Rom: Roy Keane, Roberto Baggio na Eric Cantona.
Ọ bụghị n'egbughị oge ' by Mumford na Sons, 'Na-etolite ebighebi' by Audra Mae si 'ofmụ ogba aghara' ụda olu na 'Na-eme Ihe Ọjọọ n'Everyzọ Ọ Bụla' site The White Stripes
Ihe Ntaneti kachasị mma: Na-emebi ihe, Sopranos na ofmụ ogba aghara.
Ndị ọ ga-achọ izute: Alex Zanardi, Ennio Morricone na Nikko Hurtado.
Ihe nkiri m atọ kacha amasị: Slumdog Millionaire, The Untouchables na Shawshank Mgbapụta.
Ndị dike na-enweghị mmasị n'egwuregwu: Alex Zanardi, Gianmarco Pozzecco na Michael Jordan.
Daniele De Rossi Biography - Ọrụ ụta:
"M mgbe niile maara na ọrụ m nhọrọ ndị 'na-ezighị ezi' na a ọkachamara larịị," De Rossi kwuru.
Ọ gara n'ihu…“Akụkụ nke ọzọ bụ na nhọrọ m bụ nke enweghị isi n'ihi na m kwesịrị igwu egwu Rome. Enwere m obi ụtọ nke anụ ahụ na nke mmetụta uche na Roma jersey na azụ m.
Afọ ndị m ga-ahapụ, m ga-eji anya mmiri banye n'ọhịa. Ilegharị anya wee chee na ọ ga-abụ egwuregwu ikpeazụ m na Olimpico moments Oge ndị ahụ mere ka m ghọta na enweghị m ike ibi na-enweghị Rome. ”
De Rossi tụrụ aro na ọ bụ ezie na o nwere ọtụtụ ohere iji si na Rom pụọ, ọ ga-abụ ihe na-egbu mgbu nke ukwuu ime nke a n'ihi ịhụnanya ọ hụrụ klọb ahụ. N'okwu ya…
“Emere m ihe wutere m karịa na amatachala m ahụmịhe Real Madrid-Barcelona ma ọ bụ igwu egwu n’ámá egwuregwu mara mma nke England.
N'oge a, emeela m ka obi ruo m ala na m maara nke ọma na enwetabeghị m ma ọ bụ mee njem otu ahụ. "
Daniele De Rossi Biography - Ezigbo Egwuregwu:
N'agbanyeghị inweta ọtụtụ ịdọ aka ná ntị na aha ọma dị ka onye na-egwu egwu siri ike n'oge oge 2005-06, na 19 March 2006, onye ọka ikpe Mauro Bergonzi toro De Rossi maka egwuregwu dị mma. Anyị ga-agwa gị ihe mere…
Roma nọ na-eso 1-0 na Serie A na Messina mgbe De Rossi nwetara goolu site na nkụnye eji isi mee, nke a gbapụrụ n'aka ya.
Onye ọka ikpe Bergonzi ahụghị ihe merenụ wee kwe ka onye nhazi ahụ guzo. Agbanyeghị, De Rossi gwara onye ọka ikpe ozugbo na ya ji aka ya tinye bọọlụ ahụ, na-eduga na a jụrụ ihe mgbaru ọsọ ahụ.
Roma gara n'ihu merie 2-1, ọ bụ ezie na De Rossi diri mmerụ ahụ na nkwonkwo ụkwụ ya n'oge egwuregwu ahụ, nke mere ka ọ pụọ izu abụọ.
Ná ngwụsị nke oge ahụ, a kpọrọ ya 2006 Serie A Young Footballer of the Year maka ọrụ ya.
Dika ozo, Na March 2016, De Rossi tinyere nrite mmeri nke World Cup na igbe ozu Pietro Lombardi, onye bu kitman nke ndị otu mba ndị Ịtali na 2006 World Cup.
Daniele De Rossi Ndụ Nke Onwe:
Daniele De Rossi nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike: Ọ bụ onye okike, onye nwere obi ụtọ, onye na-emesapụ aka, onye nwere obi ụtọ, onye obi ụtọ na nke obi ụtọ.
Ajọ: Ọ pụrụ ịdị mpako, isi ike, na-eche nanị banyere onwe ya.
Ihe De Rossi nwere mmasị: Thelọ ihe nkiri, na-eme ezumike, na-enwe mmasị n'ebe ọ nọ, na-azụ ihe dị oke ọnụ, na-enwu gbaa ma soro ndị enyi na-ekpori ndụ
Ihe De Rossi achọghị: A na-eleghara ya anya, na-eche eziokwu siri ike ihu, na a naghị emeso ya dị ka eze ma ọ bụ eze nwanyị.
Daniele De Rossi bụ n'ezie onye ndu a mụrụ. Ọ dị oke egwu, ihe okike, inwe obi ike onwe ya, nke kachasị ma sie ike iguzogide.
De Rossi nwere ike iru ihe ọ bụla ọ chọrọ n'akụkụ ọ bụla nke ndụ ọ na-eme. Enwere ike doro anya na De Rossi na ha "Eze nke ọhịa" ọnọdụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Daniele De Rossi Storymụaka Akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Bọchị agbanweela: Machị 6, 2021